UMARKO 11 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
UMARKO 11UMARKO 11
(Mat 21:1-11; Luka 19:28-40; Yoh 12:12-19)
111Ke kaloku, bakusondela eJerusalem, eBhetefage naseBhetani, ngaseNtabeni yemiNquma, uYesu wathuma ababini kubafundi bakhe, 2esithi kubo: “Hambani niye kule dolophana ikhangelene nani. Nothi ke ningenanje nifumane inkonyana yedonki ibotshelelwe, ekungazange kukhwele mntu kuyo. Yikhululeni ke, niyizise apha. 3Ukuba ubani uthe kuni: ‘Kutheni na ukuba nikwenze oku?’ ze nithi: ‘Iyafuneka eNkosini. Iza kubuyiswa kwangoku.’ ”
4Basuka ke baya, bayifumana inkonyana ibotshelelwe ngasesangweni esitalatweni. Bakuyikhulula ke, 5abathile kwababemi khona bathi kubo: “Nenza ntoni na, niyikhulula nje inkonyana?”
6Bathetha ke njengoko babeyalelwe nguYesu, baza bayekwa. 7Bayizisa inkonyana kuYesu, bandlala iingubo zabo phezu kwayo, wakhwela. 8Abaninzi ke bandlala iingubo zabo endleleni, bathi abanye bandlala amahlamvu abawakhe emasimini. 9Abo babehamba ngaphambili nabo babelandela ngasemva babedanduluka besithi: “Camagu! Makabongwe lowo uzayo egameni leNkosi! 10Makabongwe oza kuvusa ulawulo lukaBawo uDavide! Sithi: ‘Bayethe!’ kuPhezukonke.”Ndum 118:25-26
11UYesu ke wangena eJerusalem, wangena *nasendlwini kaThixo, wahamba ezibuka izinto zonke, wathi, ngenxa yokuba kwakusekuhlwile, waphuma waya eBhetani, enabafundi bakhe abalishumi elinambini.
Umqondiso womkhiwane; ukuvalwa korhwebo endlwini kaThixo
(Mat 21:12-22; Luka 19:45-48; Yoh 2:13-22)
12Ngengomso, bakuba bephumile eBhetani, uYesu waziva elambile, 13waza wathi, akuba ebone umkhiwane uthe qelele, unamagqabi, waya kukhangela ukuba angafumana siqhamo na kuwo. Akufika kuwo akafumananga nto ngaphandle kwamagqabi, kuba kwakungelilo ixesha lamakhiwane. 14UYesu ke wathi kuwo umkhiwane: “Ze kungaze kutyiwe siqhamo kuwe naphakade!”
Babesiva abafundi bakhe.
15Bafika ke eJerusalem, uYesu waya kungena *endlwini kaThixo, waza wabakhupha abathengayo nabathengisayo, wathi neetafile zabatshintshi bemali nezihlalo zabathengisa amahobe wazibhukuqa. 16Wayengavumi ukuba kubekho bani ucanda endlwini kaThixo ethwele nokuba yintoni na. 17Wabafundisa esithi: “Akatsho na uThixo *eziBhalweni ukuthi: ‘Indlu yam iya kubizwa ngokuba yindlu ekuthandazelwa kuyo ziintlanga zonke’Isaya 56:7? Ke nina niyenzé umqolomba wezihange.Jer 7:11”
18Bekuvile oku ababingeleli abaziintloko nabachazi-mthetho, bafuna indlela abanokumbulala ngayo uYesu. Babesoyika, kuba indimbane yonke yayimangalisiwe yimfundiso yakhe.
19Kwakuhlwa, uYesu nabafundi bakhe baphuma esixekweni. 20Kwaza kwathi kusasa, ukubuya kwabo, bawubona umkhiwane lowo womile ukususela ezingcanjini. 21UPetros ke ekhumbule okwezolo, wathi kuye: “Mfundisi, khangela umkhiwane owuqalekisileyo womile.”
22Waphendula uYesu wathi kubo: “Kholwani kuThixo. Ndithi kuni, inene, 23othe kule ntaba: ‘Funquka, uphoseke elwandle;’ abe ke esitsho engathandabuzi entliziyweni yakhe, kodwa ekholwa ukuba oko akuthethayo kuya kwenzeka, wokwenzelwa. 24Ngenxa yoko ndithi kuni, zonke izinto enizicela nithandaza, kholwani ukuba senizinikiwe; nozifumana ke. 25Naxa nithandazayo, ukuba ninendawo ngakubani, mxoleleni, ukuze noYihlo osezulwini anixolele iziphoso zenu. [ 26Ke, ukuba anixoleli, nàye uYihlo osezulwini akayi kunixolela iziphoso zenu.]”
(Mat 21:23-27; Luka 20:1-8)
27Bafika ke eJerusalem kwakhona, kwaza kwathi, uYesu ehamba-hamba *endlwini kaThixo kwafika kuye ababingeleli abaziintloko nabachazi-mthetho namadoda amakhulu. 28Bona bambuza besithi: “Ezi zinto uzenza ngagunya lini na? Ingubani na kakade okunike elo gunya lokwenza ezi zinto?”
29Waphendula uYesu wathi kubo: “Nam ndiya kunibuza mbuzo mnye. Ukuba nithe nandiphendula, ndonixelela ukuba ndizenza ngagunya lini na ezi zinto. 30Khanindixelele, ngaba ubhaptizo lukaYohane lwaluvela ezulwini, okanye lwaluvela ebantwini?”
31Baxoxa bodwa, besithi: “Ukuba sithe: ‘Lwaluvela ezulwini,’ wothi: ‘Kwakutheni ke phofu ukuze ningamamkeli?’ 32Ngaba sinokuthi: ‘Lwaluvela ebantwini’?” – kodwa babesoyika isihlwele, kuba bonke babesithi uYohane *wayengumshumayeli ngokwenene. 33Baphendula ke bathi kuYesu: “Asazi.”
Waphendula uYesu wathi kubo: “Nam ke andinixeleli ukuba ndizenza ngagunya lini na ezi zinto.”